Famaranana Apokalypsy Radio Fanambarana Mahajanga - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Ny sabata 14 Jolay 2012 lasa teo no nofaranana tamin’ny fomba ofisialy ny fampianarana Apokalypsy tao Mahajanga.
Nialohavana kaoferansa lehibe teo amin’ny kianjan’ny “Maison de la culture Mahajanga” izany ny Alarobia 11, Alakamisy 12 ary Zoma 13 Jolay 2012. Nitarika ny fotoana rehetra tamin’izany ny filoha iraisam-pirenen’ny Fiangonana Apokalypsy, dia ny pasitera Mailhol.
Ny sabata kosa dia nisy fivoriam-bavaka lehibe izay mbola notontosaina tao amin’ny “Maison de la culture” ihany. Tamin’ny fotoana tapany maraina dia nizara ny Tenin’Andriamanitra ny pasitera Mailhol. Taorian’ny fanaovana batisa ireo 206 mianadahy, tamin’ny tapany hariva, dia niroso tamin’ny fitsofan-drano ny zaza ny ray aman-dreny teo anivon’ny fiangonana. Nisy ihany koa ny fizarana ny fahefana ho an’ireo vao vita batisa sy ireo izay mbola tsy nandray izany.
Ireo rehetra ireo dia nofaranana tamin’ny rindran-kira ara-pilazantsara lehibe izay nohafanain’ireo tarika sy sampana avy ao Mahajanga ary ny avy eo amin’ny rezionaly Antananarivo. Isan’ny nitondra ny anjarany tamin’izany ny groupe midera Alasora, ny Samariste Alasora, ary ny antoko mpihira ny TRIA Ambohimanambola sy Gloire de l’Apocalypse Ambohimalaza.